Gabdha somaliyeed ajnabi gursaday, raga somalida dhulka la dhacay. - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By burahadeer, September 28, 2014 in Politics
who really cares who going with who, guess only the non confidant.Have seen some barracudas & real gold diggers.Good men and women, bad men and women all around.
As long as they Sunni muslim....let the ummah grow...
Wareerka ka yimid wadamada shisheeye bay ka mid tahay jaamac dooni maayno romance waxba kama yaqaan weligiisna shumac nooma shidin habeenkii xuska guurkeenana dhabanka nagama taaban.
Haday ku faraxsan yihiin ajaanibta may iska barakaystaan? Waxaan u arkaa inay jaamac ka maarmi la’yihiin.
Markee adeeradooda soo wacaan oo la yiraahdo ilma'adeeradiina ayaa xanuunsan ee wax soo dhiiba. Markee habaryaalkooda soo wacaan oo la dhaho ilmahabreedkiina jiran ee wax keena -- aan aragno shisheeyaha ay guursadeen inay 'romantic' doolarka deeqsi ku yihiin iyo in kale sida ragga Soomaaliyeed.
ama ayeeydaaba xanuunsanaysee kaalaya Nairobi u qaada.Uma inaadeerkaaba Libya ku xidhane lacgtii tahriibta soo dir hadii kale waa la dila.
Yaradkii horta mee?.
Dumarkaa sharaf ayaa ka muuqata. Dayac kama muuqdo. Runtana way ku rafteene, ma nerve ayey idin taabteen kuwiina dacwada qaboow? Gym taga oo is jafjafa kuye! KKKK, si fiican ayey isu difaaceen gari Alle ayey taqaanaaye.
Dumarkaa sharaf ayaa ka muuqata. Dayac kama muuqdo.
Dhaxaabo Dhaxaabo qiimadheena habeen iyo malin waa tiirisaan.
Bur and Cid, both your comments are silly.
Ma fahmin qaybta hore ee qoralkaga. Rayigayga iyo sidaan dumarkaa u arkaan ka hadlay waa maxay dagaalku.
Bur and Cid, both your comments are silly.]]]
ma waxaad dibaaqaysa waxyaale hore.
Macalin af soomaaliga soo Baro, hadii kale carabi ku qor!
or you pull the sword if you hear someone uttering the word 'muslim' regardless.
Wax yaabaha la yaabka leh ee dumarka soomaalida leeyihiin waxaa ka mida luuqaddaha dalalka ay tagaan waxay ku bartaan sadex usbuuc lagana yaabee kii diyaaradda ay kasoo wada degeen ku tilmaanto reer miyi aan waxba u bilawnayn sidii inay ayadu Alaska ku dhalatay.
Taas waxaad ka garan kartaa in ajaanibka la jeclaa intaanba lasoo dhoofin, jaamac iyo faarax waxaan kula talin lahaa ninkii wax ka garan waaya luuqadooda, hindiya maalintii waxaa ku dhalata 10 milyan oo gabdhood oo muslina ayadaana lacag ku siinaysa dhunkashana kugu toosinaysa salaadda subax siiba xaydar abad.
Anigu feker ka duwan baan qabaa!
Raga soomaaliyeed kuwa badan waxaad moodaa in aay dumarka soomaaliyeed jealous ka yihiin. Waayo anigu waligeey ma arkin gabar soomaaliyeed oo video ka sameeysay wiil soomaaliyeed, ama pictures been ah wareejinaysa oo caaynaysa wiilasha soomaaliyeed. Hada ilaa meel kasta waxaa laga fariisan la yahay rag xumaanta dumarka soomaaliyeed w afla gadeeynaya. Ma aqaan wax raga qaar si ka ah, kuli ma lihi aniga 13 will baa ila dhalatay Allhamdulilah waa rag diin ku koray oo sharaf leh balse runtii rag badan oo soomaali ah are miss judging Somali women. Somali women dhana waa fiican yihiin ma lihi, balse ma aha in la dhaho dumarka soomaaliyeed oo dhan waa dad xun hadii hal xun la arko. Nin kasta hooyadiis, xaaskiisa , walaalihiis ha ka soo qaado meeqa baa jaceyl in aay ajaanib racaan, Meeqa baa xun oo raga xumaato ku sameeya, taas ha ka fekero. Koley raga soomaaliyeed waxaan leeyahay dumarku waa wada hooyadaa, walaashaa iyo taa qabti. Hadaay xun xun yihiin dumarka soomaaliyeed oo dhan waa xun xun yihiin. Hadaay kula fiican yihiin dumarka soomaaliyeed oo dhan waa fiican yihiin.
Hadaan u soo noqono gabdhahaan wax caay ah ma leh iyagaa iskood u guursadey raga ajaanibka ah, hadaay muslim guursadana diin ka celinaysaa ma jirto. Kama duwana raga soomaaliyeed ee dumarka ajaanibka guursada like just these :::
Ismahan true what you saying and that Norwegian wedding is just breathtaking.